Baraha Bulshadu Waa Cusub PR | Martech Zone
Isniintii, September 20, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Ryan smith
Waxaan dhawaan la qadeeyay qaar ka mid ah asxaabteyda xiriirka bulshada, iyo sidii had iyo jeer sheekadu u jeesatay dhanka taatikada iyo farsamooyinka loo adeegsado warshadeena. Aniga oo ah kan kaliya ee kooxda adeegsada baraha bulshada oo ah qaabka kaliya ee isgaarsiinta macaamiisha, qaybtayda wadahadalka ayaa umuuqda kuwa uguyar kooxda. Tani waxay noqotay inaysan ahayn kiiska, waxaana igu kalifay inaan ka fikiro: Baraha bulshada ma aha qayb kaliya oo PR ah - warbaahinta bulshada is PR
Maalin kasta joornaalada PR iyo joornaalada waxaan ku maqalnaa siyaabo aad ugu ridi karto warbaahinta bulshada istaraatiijiyadaada guud ee PR. Waxaan ku tuurayaa wax geesinimo leh: ka dhig warbaahinta bulshada tiir-dhexaadka istiraatiijiyaddaada PR, oo ku dhis isgaarsiintaada dhaqameed hareerahaaga.
Heerka gaadhista iyo saamaynta lama barbar dhigi karo baraha bulshada. Iyadoo 500 million users on Facebook, 190 million on Twitter, Iyo laba bilyan oo fiidyow maalintii lagu arkay Youtube, runti ma jiraan dhagaystayaal suurtagal ah oo ka weyn oo la mid ah barxad kale. Furaha ayaa ah fahamka sida looga faa'iideysto barnaamijyadan si aad astaantaada u hor dhigto dad badan oo dadkan ah intii suurtagal ah.
Dad badan ayaa weydiin doona, "Ka waran haddii aan dooneyno inaan ka helno sumadeena warbaahinta sida telefishanka, raadiyaha, iyo daabacaadda?" Jawaabteydu wali waa, isticmaal baraha bulshada.
Hay'ad kasta oo warbaahineed oo heer qaran ah waxay la socotaa warbaahinta bulshada, xarumaha warfaafinta maxalligana sidaas oo kale ayey sameynayaan. Furaha ayaa ah in la abuuro oo lagu dhajiyo waxyaabaha ku jira bogaggaaga xitaa marka aysan jirin wax war ah oo ka soo baxa ururkaaga. Aad ayey muhiim u tahay in la fahmo oo la qaato fikraddan.
Mawduucu ma aha oo kaliya inuu wax dhajiyo markii aad hayso wax aad dhahdo. Mawduucu wuxuu qayb ka yahay wadahadalka.
Muhiimadda waxaas oo dhami waa in la xoojiyo xaqiiqda ah in la joogo waqtigii shirkadaha la siin lahaa waqti dheeraad ah oo ay diiradda saaraan warbaahinta bulshada markay timaaddo istiraatiijiyadooda PR. Haddii ujeeddada ololahaaga xiriirka bulshada ay tahay inaad la xiriirto macaamiishaada, waratadaada, iyo warbaahinta, markaa warbaahinta bulshada ayaa ah aaladdaada.
Ma dhahayo qof walba waa inuu joojiyaa olalaha warbaahinta ee soo jireenka ah. Saas ma aha, baraha bulshada waa halka aad ka heli doontid macaamiishaada, hoggaamiyeyaasha ra'yigaaga, iyo saxaafadda, sidaa darteed dhigista kheyraadkaaga internetka waxay ku siin doontaa soo laabasho sare oo maalgashi.
Tags: prxiriirka dadweynahawarbaahinta bulshada iyo xiriirka dadweynaha
Ryan waa Maamulaha Warbaahinta Bulshada iyo Horumarinta Ganacsiga ee Raidious. Isagu waa xirfadle xiriirka bulshada ku takhasusay u adeegsiga warbaahinta bulshada aalad isgaarsiineed suuqgeyn ah. Ryan wuxuu khibrad u leeyahay ciyaaraha, siyaasadda, dhismaha, iyo warshado kale oo badan.
Indiana: Caasimad Suuq Lagu Cabbiro Dunida